[Review] Máy rửa mặt Xiaomi loại nào tốt? Review chi tiết 3 loại | Muasalebang - Muasalebang
xiaomi 0 lượt xem 17/04/2022
Đang Đọc: [Review] Máy rửa mặt Xiaomi loại nào tốt? Review chi tiết 3 loại | Muasalebang in Muasalebang
Ukugeza ubuso bakho kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu esimisweni sakho sokunakekela isikhumba. Ukusebenzisa ukugeza ubuso ukuhlanza isikhumba kuwumkhuba ovelayo namuhla. Kunemigqa eminingi emakethe njengamanje umshini wokuwasha Iphuma ezinkampanini ezihlukene, omunye wemikhiqizo ekhethwa abantu abaningi namuhla umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi, onekhwalithi enhle impela kodwa intengo inengqondo ngokwedlulele. Funda isihloko esilandelayo ukuze uthole Ingabe kufanele ngithenge ukugeza ubuso kwangempela kwe-Xiaomi? azizona?
1 Umshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi brand
2 Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwezinhlobo ezi-3 zokugeza ubuso be-Xiaomi
2.1 2.1. I-Xiaomi Mijia Sonic Facial Washer
2.1.1 Ubuchwepheshe bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
2.1.2 Isakhiwo somshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi
2.1.3 Ukusetshenziswa ngempumelelo komshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
2.1.4 Ubuhle nobubi bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
2.2 2.2. Umshini wokuwasha we-Xiaomi Inface
2.2.1 Ubuchwepheshe bomshini wokuwasha we-xiaomi Inface
2.2.2 Isakhiwo somshini wokuwasha we-Xiaomi Inface
2.2.3 Ukusetshenziswa ngempumelelo komshini wokugeza ubuso i-xiaomi Inface
2.2.4 Izinzuzo kanye nokubi komshini wokuwasha ubuso be-Inface
2.3 2.3. Umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
2.3.1 Ubuchwepheshe bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Inface Gen 2
2.3.2 Ukwakhiwa komshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
2.3.3 Ukusebenza kahle kokusetshenziswa komshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
2.3.4 Ubuhle nobubi bomshini wokugeza ubuso we-Inface Gen 2
3 Qaphela uma usebenzisa umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi
4 Ungathengisa kuphi umshini wangempela wokuwasha ubuso be-Xiaomi
Umshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi brand
Uhlobo lwe-Xiaomi lwasungulwa maphakathi no-2010 futhi lwethulwa eVietnam eminyakeni emibili edlule. Kusukela kumkhiqizi wezinga elincane, uhlobo lukhule lwaba ngumhlinzeki ohamba phambili wama-smartphone e-China kanye nesithathu ngobukhulu emhlabeni. Ngaphandle kwalokho, le nkampani ikhiqiza neminye imikhiqizo eminingi okuhlanganisa nayo Umshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi.
Umshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi waziwa ngabathengi abaningi futhi uthathwa njengomkhiqizo ohlangabezana nezinqubo ezi-3 zokumnandi – okunomsoco – okushibhile. Imikhiqizo yakho ibusa kancane kancane emakethe futhi izuza ukwethenjwa kubathengi ngomkhiqizo wekhwalithi enhle ngentengo ethengekayo okufanele ube nayo.
Ukubuyekezwa okuningiliziwe kwezinhlobo ezi-3 zokugeza ubuso be-Xiaomi
Izinhlobo ezi-3 zamawasha obuso e-Xiaomi ezithola ukutuswa okukhulu njengamanje kanye nokukhetha okuningi okuvela kubathengi i-Xiaomi Mijia Sonic yokugeza ubuso, i-Xiaomi Inface wash, nesihlanzi sobuso sika-Xiaomi Inface Gen 2. Ake sibone isihloko Ukubuyekezwa kokugeza ubuso kwe-Xiaomi Chofoza ngezansi ukuze ufunde kabanzi mayelana nale mikhiqizo emi-3!
2.1. I-Xiaomi Mijia Sonic Facial Washer
Imininingwane enemininingwane mayelana ne-Xiaomi Mijia Sonic yokuhlanza ubuso okufanele uyazi.
Ubuchwepheshe bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
Umshini ukhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-omnidirectional 3D nemvamisa engaba ngu-5200 rpm. Ngaphezu kwalokho, umshini unezinwele ze-1915 ezilawulwa ukudlidliza ukuvumela ukuhlanzeka okujulile kobuso, ukususa amafutha amaningi kanye nokusekela massage.
Isakhiwo somshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi
Isakhiwo sangaphandle sedivayisi senziwe nge-silicone ye-antibacterial ethambile ephephile esikhumbeni, futhi ngaphakathi kuyimpahla ye-SEBS enwebekayo ezwakala ithambile futhi inomthelela omnene esikhumbeni. Indawo yomshini ihlukaniswe izingxenye ezi-3 ezihlukene ukuze zilungele ukuhlanza indawo ngayinye yobuso njenge-T-zone, indawo yezinhlamvu, indawo yamehlo, ikhala… ukusiza abasebenzisi ukuthi banyakaze ngokuguquguqukayo, bakhulise amandla. ukuhlanza ubuso ngokujulile.
Ibhethri elinomthamo ongu-400mAh ngemuva kokushajwa okungu-1 cishe imizuzu engama-400 yokusetshenziswa, ungalisebenzisa kuze kufike ezikhathini ezingama-264 ngaphandle kokushajwa kabusha, uma lisetshenziswa kanye ngosuku ungalisebenzisa kufikela ezinyangeni ezi-3. Kodwa-ke, lesi yisikhathi esifundwayo ngesikhathi esifanele futhi iqiniso lizoshintsha.
Ukusetshenziswa ngempumelelo komshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
Yenziwe ngezinto ezithambile ze-silicone ezinezindlela zokuhlanza ezingu-3 kanye nomklamo ofanele indawo ngayinye ebusweni, isihlanzi sobuso se-xiaomi Mijia Sonic sivumela i-xiaomi Mijia Sonic yokugeza ubuso ukuthi ihlanze ngokujulile isikhumba sakho, isuse konke ukungcola namafutha. i-epidermis ngenkathi ubhucunga ubuso bonke ukuze udale umuzwa wokuphumula okuthambile. Inikeza umphumela ophelele wokuhlanza ukusiza ukuhlanza nokuphumula isikhumba ngemuva kokusetshenziswa.
Ubuhle nobubi bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Mijia Sonic
Inzuzo: Ikhono lokuhlanza ngokuphumelelayo ngobuchwepheshe bokuhlanza be-3D nama-bristles athambile kakhulu aletha umuzwa ophumuzayo esikhumbeni uma kuqhathaniswa nokugeza ubuso okuvamile. Ngaphandle kwalokho. Umkhiqizo unikeza isikhathi eside ukuwusebenzisa, ukuze ukwazi ukuwusebenzisa ngokunethezeka ngaphandle kokukhathazeka ngokuphelelwa ibhethri. Ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-IPX7 bokumelana namanzi, ungaqiniseka ukuthi uzowusebenzisa ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi idivayisi izoba manzi, futhi kube lula ukuyihlanza ngemva kokusetshenziswa ngakunye. hlola amandla emisipha yobuso futhi ukukhumbuze ukuthi ushintshe izinhlangothi njalo ngemizuzwana engama-20 ukuze usize ukuhlanza ubuso bonke. Umklamo ohlangene kulula ukuwuthwala.
Umkhawulo: Uma uqala ukuyisebenzisa, uzoba nephunga eliqinile le-silicone ngemva kokusetshenziswa okumbalwa, lizonyamalala. Umshini wokuwasha nawo unokusetshenziswa okukodwa kuphela, ukuhlanza, futhi awunazo ezinye izinsiza.
Intengo yesithenjwa: 420,000 VND.
2.2. Umshini wokuwasha we-Xiaomi Inface
Izici zochungechunge lokugeza ubuso be-Xiaomi Inface zifaka:
Ubuchwepheshe bomshini wokuwasha we-xiaomi Inface
Umshini wokuwasha we-Xiaomi Inface Iphinde ibe ngumnikazi we-3D wobuchwepheshe bokuhlanza be-multi-directional obunamamodi angu-3 nama-soft, ama-bristles aphephile angacasuli isikhumba. Isiza ukuhlanza ubuso ngokujulile, ukususa amafutha amaningi kanye nokusekela massage.
Isakhiwo somshini wokuwasha we-Xiaomi Inface
I-Xiaomi Inface yokugeza ubuso inomklamo omncane ongunxande nezici eziyenza ibe yintsha futhi ihehe. Idivayisi inobukhulu obungu-80 x 53 x 30.4 mm, isisindo esingu-83g silingana nesundu. Iphrosesa isebenzisa ubuchwepheshe be-MCU obungenisiwe ekusebenzeni okuphezulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Umshini usebenzisa isilawuli senkinobho esisabela kahle.
Ama-bristles enziwe ngemicu ye-silicone enosayizi ongaba ngu-4.5mm ophephile futhi angabangeli imihuzuko esikhumbeni uma ephinda esetshenziswa, engahlanza ngokujulile izindawo okunzima ukufinyelela kuzo. Isebenza kanjani Umshini wokuwasha ubuso Lingisa imodi yokusikhipha ngesandla enenjini enezinjini ezimbili eyi-centrifugal kanye nendlela yokudlidliza ye-Sonic. Umklamo womshini unomthambeko ngokusho kwezimbotshana zobuso ze-15 degrees kuya ku-0 degrees okuvumela umshini ukuthi uhlanze ujule ku-pore ngayinye ngaphandle kokulimaza isikhumba.
Umkhiqizo usebenzisa ibhethri lembobo yokushaja ye-USB elinomthamo ongu-400mA futhi lisebenza kahle kakhulu ezingeni lokushisa elingu- -10ºC ~ 40 ºC. Ngokuhambisana nalokho, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-IPX7 obungangeni manzi buvikela idivayisi emonakalweni ngokungena kwamanzi okusho futhi ukuthi ukhululekile Umshini wokuwasha ubuso be-Xiaomi endlini yokugezela noma endaweni emanzi ngaphandle kokukhathazeka.
Ukusetshenziswa ngempumelelo komshini wokugeza ubuso i-xiaomi Inface
Umshini wokuwasha we-Xiaomi Inface umshini wokugeza ubuso oshibhile onokuhlanza okusheshayo nokujulile owaziwa futhi wamukelwe amakholwa amaningi. Umuzwa wokugeza nokuthinta ubuso bomshini ukhululekile ngokuphelele futhi umnene, akukho umuzwa wokuxubha noma ukucasuka ngenxa ye-silicone bristles ethambile. Ngaphandle kwalokho, umshini uyakwazi futhi ukuhlanza okujulile futhi ungene endaweni ngayinye yembotshana ukuze ususe ukungcola kanye ne-sebum ngempumelelo ukusiza ukusula isikhumba nokuqinisa izimbotshana kahle kakhulu.
Ngemuva kokugeza ubuso ngakunye ngomshini wobuso, isikhumba sobuso sizozizwa sikhululekile, sikhululekile futhi sinempilo ngenxa ye-massage ephumuzayo. Ukuba negalelo ekuthuthukiseni ukunwebeka kwesikhumba esikhumbeni esinempilo kunokugeza ubuso bakho ngendlela evamile.
Izinzuzo kanye nokubi komshini wokuwasha ubuso be-Inface
Inzuzo: Imodi yokuhlanza isikhumba ngokushesha futhi ijule phansi kuma-pores, ishiya isikhumba sikhululekile futhi sikhululekile ngenxa ye-massage ngenkathi ugeza ubuso. Isikhathi sokusetshenziswa komkhiqizo side nesidingo esincane sokushajwa kabusha. Ngokuhambisana nalokho, akudingeki ukhathazeke ngokuthi umshini wonakaliswa ukungena kwamanzi, ngakho-ke uqinile kakhulu. Umshini wokuwasha ubuso Kukhona nemibala emi-4 ongakhetha kuyo ukuze ivumelane nezintandokazi zakho: obomvu, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka nonsomi.
Umkhawulo: inephunga eliqinile le-silicone lapho liqala ukusetshenziswa futhi lizofiphala ngemva kwezikhathi ezingu-2-3 zokusetshenziswa. Ikhanda lebhulashi linzima ukuthuthela kuzo zonke izindawo zesikhumba njengamakhona ekhala nasemakhoneni amehlo futhi linomsebenzi wokuhlanza kuphela.
Intengo yesithenjwa: 265,000 VND.
2.3. Umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
Amaphuzu avelele we I-Xiaomi Inface Gen 2 yokuhlanza ubuso zihlanganisa:
Ubuchwepheshe bomshini wokugeza ubuso we-xiaomi Inface Gen 2
Umshini wokuwasha we-xiaomi gen 2 unobuchwepheshe obufanayo nenguqulo yangaphambilini, okuwubuchwepheshe bokuhlanza be-3D be-omnidirectional. Kodwa-ke, ngale nguqulo ye-Gen 2, iye yathuthukiswa yaba yizindlela zokuhlanza eziyinhloko ezingu-5, ngakho-ke ukhululekile kakhulu lapho ukhetha imodi yokuhlanza efanele yesimo sakho sesikhumba ezimweni ezithile.
Ukwakhiwa komshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
I-Xiaomi Gen 2 Iwasha Yobuso inesakhiwo esifanayo nesenguqulo yangaphambilini i-Xiaomi Inface kodwa ithuthukiswe ngezici ezithile ezivelele okuyizinwele eziklanyelwe ukuba zithambe, zisebenziseke kalula, ziphephe esikhumbeni kunokuba zifanele labo abanesikhumba esizwelayo. Ubuso bunokuningi ukungcola.
Ubuchwepheshe be-Sonic wave buphinda kabili ukusiza isikhumba ukuthi sihlanzeke ngokujulile, izinga lokuhlanza libuye linyuswe ukusuka ku-3 kuye ku-5 ukuze lilungiswe kalula ukuze livumelane nesikhumba kangcono. Kukhona ukukhanya okukhomba lapho kushajwa, kodwa ngombala omnyama ngenxa yezinto eziwugqinsi ze-silicone, ukukhanya akubonakali. Lokhu akulona iphutha lomkhiqizi.
Ukusebenza kahle kokusetshenziswa komshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2
Umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi Inface Gen 2 Ukuhlanza okujulile okusebenzayo ukususa ukungcola kanye ne-sebum kusuka kuma-pores ukusiza isikhumba somile futhi siphumule. Ngezindlela zokuhlanza ezingu-5, abasebenzisi bangakhetha kalula amandla afanele esikhumbeni sabo sobuso futhi bahlanze ngokushesha ngempumelelo ngaphandle kokudala umonakalo wesikhumba. Ama-bristles e-xiaomi gen 2 face wash athambile futhi abushelelezi, ngakho-ke lapho esebenza esikhumbeni, abushelelezi ngokwedlulele futhi athambile, akunikeza umuzwa wokugeza ubuso bakho ngenkathi uphulula ngobumnene ukuze wenze isikhumba sakho sibe nempilo futhi sinwebeka kakhudlwana.
Ubuhle nobubi bomshini wokugeza ubuso we-Inface Gen 2
Inzuzo: Idizayini ehlangene enobuchwepheshe bokuhlanza be-3D bokuhlanza okujulile okusheshayo nokuphumelelayo. Ngokuhambisana nalokho, ama-soft bristles ayenziwe ngezinto eziphephile esikhumbeni futhi azibangeli ukucasuka kwesikhumba uma zisetshenziswa. Ukumelana okuhle kwamanzi okuhlala isikhathi eside. Idizayini ehlangene ilungele ukuthwala, imibala ehlukahlukene futhi ingasetshenziselwa wonke amadoda nabesifazane.
Umkhawulo: Kukhona iphunga elinamandla elincane lapho lisetshenziswa okokuqala, kodwa lesi simo sizonyamalala ngokusetshenziswa okulandelayo. Omunye umkhawulo ukuthi kunesici esisodwa sokuhlanza esingahlanganisiwe nezici ezithuthuke kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 350,000 VND.
Qaphela uma usebenzisa umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi
Amanye amanothi lapho usebenzisa i-Xiaomi yokugeza ubuso ukuletha ukusebenza kahle kokuhlanza:
Okokuqala, kufanele uvule idivayisi futhi ulungise imodi yokudlidliza ukuze ivumelane nobuso bakho, ngakho uyizwe kuqala ngesandla.
Kunconywa ukusebenzisa isicoci sesandla ukuze wenze igwebu ngaphambi kokugcotshwa ebusweni, bese usebenzisa umshini wokubhucunga omnene.
Sebenzisa umshini wokugeza ubuso we-Xiaomi ukuze uhlikihle ngokulinganayo esikhumbeni imizuzwana engaba ngu-90, lapho umshini uyeka ukudlidliza, umshini ukushukumisela ukuba ushintshe izindawo, sicela ushintshele kwenye indawo yesikhumba futhi usihlikihle ngokulinganayo. Kufanele ihlikihle kahle indawo yamaphiko ekhala, amakhona ekhala, amakhona ezindebe, i-T-zone.
Ngemuva kokusetshenziswa, kufanele uhlanze umshini futhi uwugcine endaweni eyomile. Ikakhulukazi ishaja yebhethri ayiwavumeli amanzi ukuthi alimaze kalula ucingo.
Kunconywa ukusebenzisa i-Xiaomi yokugeza ubuso kanye ngosuku ukuletha isikhumba esomile nesihlanzekile.
Ungathengisa kuphi umshini wangempela wokuwasha ubuso be-Xiaomi
Ukuthenga imikhiqizo Ukugeza ubuso kwangempela kwe-Xiaomi E-Vietnam, unga-oda kuwebhusayithi yenkampani ye-elekthronikhi ngoba umkhiqizo usatshalaliswe ngokusemthethweni eVietnam. Ngaphezu kwalokho, ungathenga nemikhiqizo kumasayithi amakhulu we-e-commerce afana noShopee, Tiki, Lazada, …
Ngaphezu kwalokho, uma ufuna ukuthenga ukugeza ubuso be-Xiaomi okucebile, ungathola ama-oda angempela avela e-China, athandwa futhi atuswa abantu abaningi.
Nasi isihloko Ukubuyekezwa kokugeza ubuso kwe-Xiaomi imininingwane. Ngethemba ukuthi nge-athikili ukwazile ukuzenzela isinqumo esifanele ukuthi uthenge i-Xiaomi face wash yangempela? Ufisa ukuthi maduzane ukhethe umkhiqizo ofanele ukusiza isikhumba esihlanzekile nesisomile.
Top game co-op mobile vui nhộn giúp gia tăng trải nghiệm | Muasalebang
Hướng dẫn cách reset máy giặt Toshiba cho người mới | Muasalebang
[Review] Máy xông tinh dầu Xiaomi loại nào tốt? Nên mua nhất | Muasalebang